Ny toeram-pitrandrahana mpanjaka Solomon (ampahany 18) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-03 mpandimby ny Magazine > Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 18)
"Ny hany zavatra tiako hatao dia ny fahotana. Nihevitra ny teny ratsy aho ary te hiteny azy ireo aho ... "Vita sy sosotra i Bill Hybels. Ilay mpitarika kristiana malaza dia nanana sidina roa nihemotra tamin'ny diany avy tany Chicago nankany Los Angeles ary nipetraka teo amin'ny làlan'ny fandaozana ny seranam-piaramanidina tao anaty fiaramanidina feno nandritra ny adiny enina ary nofoanana ny sidina fampitana azy. Farany dia afaka niditra tao anaty fiaramanidina izy ary nianjera tao amin'ny seza nisy azy.Ny kitapo ny tanany dia teo am-pofoany satria tsy nisy toerana tao an-trano sy tao ambanin'ireo seza. Vao nanomboka nihetsika ny fiaramanidina dia nahita vehivavy iray nidina haingana teo am-baravarana izy ary niankina tamin'ny lalantsara. Nitondra kitapo maromaro izay nandeha hatraiza hatraiza izy, fa izany no kely indrindra amin'ny zava-manahirana azy. Ny nahatezitra azy dia ny hoe "nivonto" ny maso iray ary toa tsy nahavita namaky ireo laharam-boninahitra tamin'ny masony hafa izy. Tsy hita maso ireo mpiandry sidina. Raha mbola tezitra mafy izy ary sahirana nanenina noho ny tenany, Ren'Andriamanitra Hybel dia nahare azy nibitsoka tao an-tsofiny: "Bill, fantatro fa tsy andro tsara ho anao io. Malahelo ianao ary niandry sidina, nijoro tamin'ny andalana ary halanao. Fa izao dia mahazo vahana ianao fa hihatsara ny andro amin'ny alàlan'ny mitsangana sy maneho hatsaram-panahy amin'ity vehivavy kivy ity. Tsy hanery anao hanao izany aho, saingy heveriko fa ho gaga anao ianao raha toa ka ataonao. "
Ny ampahany tamiko dia te hilaza hoe: "Mazava ho azy fa tsia! Tsapako fotsiny izany. ”Fa nisy feo hafa nilaza hoe," Angamba tsy misy ifandraisany ny fihetseham-poko. " Angamba tokony hanao izany fotsiny aho. ”Dia nitsangana izy, nidina ny làlana ary nanontany ilay ramatoa raha afaka manampy azy hahita ny toerany izy. Rehefa fantany fa miteny anglisy tsy tapaka izy dia nalainy ny kitapony efa nidina tady, nentiny nankany amin'ny sezany izy ireo, nametaka ny valizy, nongotany ny palitao, ary azony antoka fa voaaro izy. Niverina teo amin'ny sezany izy avy eo.
“Afaka mifono zava-miafina kely ve aho mandritra ny fotoana fohy?” hoy izy nanoratra. “Rehefa nipetraka teo amin’ny sezako indray aho, dia nisy onjam-pifaliana sy fifaliana tonga tamiko. Nanomboka nanjavona ny fahasorenana sy ny fihenjanana izay nanenika ahy nandritra ny andro. Nahatsapa orana mafana amin'ny fahavaratra aho nanasa ny fanahiko feno vovoka. Sambany aho tao anatin’ny 18 ora.” Ohabolana 11,25 (EBF) dia marina: "Izay tia manao soa dia ho voky, ary izay manondraka (ny sasany) dia hosotroina koa."
Ny mpanjaka Solomona dia nindrana ireto teny ireto tamin'ny sary avy amin'ny fambolena ary midika ara-bakiteny fa izay rehetra manondraka dia tokony hampisotro ny tenany ihany koa. Nihevitra izy fa mety ho zatra mpamboly mahazatra izany rehefa nanoratra ireo teny ireo izy. Mandritra ny fotoanan'ny orana, rehefa miampita ny renirano, ny tantsaha sasany izay akaikin'ny sisin-drano dia manondraka ny rano ho ao anaty valan-javaboary lehibe. Avy eo, mandritra ny haintany, dia manampy ny mpiara-monina aminy tsy manam-pako rano ny mpamboly izay tsy tia tena. Avy eo izy dia nanokatra tsara ny hidim-baravarana ary nitondra ny rano manome fiainana ho an-tsain'ny mpiara-monina. Raha misy haintany hafa, tsy manana rano na tsy manana rano ho an'ny tenany ny mpamboly izay tsy tia tena .. Ny tantsaha mpifanolo-bodirindrina, izay mbola nanangana valan-jaza kosa dia hamaly soa azy amin'ny famatsiana rano ny taniny.
Tsy mikasika ny fanomezana zavatra ka ahazoanao zavatra
Tsy hoe manome 100 euros izany mba hamerenan'Andriamanitra ny vola mitovy na mihoatra. Io fitenenana io dia tsy manazava izay azon’ny malala-tanana (tsy voatery ara-bola na ara-pitaovana) fa vao mainka mahatsapa zavatra lalina kokoa noho ny fahasambarana ara-batana. Hoy i Solomona: “Izay te hanao ny tsara dia ho afa-po”. Ny teny hebreo nadika hoe “mamelombelona / mamelombelona” dia tsy midika hoe fitomboan’ny vola na fananana, fa midika kosa hoe fanambinana ara-panahy sy fahalalana ary fihetseham-po.
In 1. Ao amin’ny mpanjaka isika dia mamaky ny tantaran’ny mpaminany Elia sy ny mpitondratena iray. Niafina tamin’i Ahaba mpanjaka ratsy fanahy i Elia ary nasain’Andriamanitra nankany amin’ny tanànan’i Zarpata izy. “Nodidiako ny mpitondratena teo mba hikarakara anao”, hoy Andriamanitra taminy. Rehefa tonga tao an-tanàna i Elia, dia nahita mpitondratena iray nanangona kitay ary nangataka mofo sy rano taminy. Namaly toy izao izy: “Raha velona koa Jehovah Andriamanitrao: tsy manana zavatra nendasina aho, afa-tsy lafarinina eran-tànan-ila ao anaty vilany sy diloilo kely ao anaty siny. Ary, indro, naka hazo iray na roa aho ka hody, ary te-hanomana ny tenako sy ny zanako lahy mba hohaninay - dia ho faty.1. Mpanjaka 17,912).
Angamba nanjary sarotra be ny fiainana teo amin'ilay mpitondratena ary maty izy. Tsy ho vitan'ny olona ny mamelona olona roa, avelany telo, miaraka amin'ny kely ananany.
Saingy mbola mitohy ny lahatsoratra:
“Ary hoy Elia taminy: Aza matahotra! Mandehana ary ataovy araka izay nolazainao fa nataonao. Fa manaova mofo voaendy ho ahy aloha, ka ento atỳ amiko; fa tokony hanendasany zavatra ho anao sy ny zanakao avy eo. Fa izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Ny lafarinina ao anaty vilany dia tsy hohanina, ary ny diloilo ao amin'ny tavoara dia tsy hisy tsy ampy na inona na inona, afa-tsy amin'ny andro handatsahan'i Jehovah amin'ny tany. Dia nandeha izy ka nanao araka izay nolazain'i Elia. Dia nihinana izy, ary izy sy ny zanany koa isan'andro. Tsy lany ny koba tao anaty vilany, ary tsy nisy tsy ampy tao amin’ny siny hoditra, araka ny tenin’i Jehovah izay nampilazainy an’i Elia.1. Mpanjaka 17,13-16) Isaky ny maraina sy hariva, isan’andro isan’andro, dia nahita lafarinina tao anatin’ny vilany sy diloilo tao anaty siny ilay mpitondratena. fanambarana 11,17 hoy ny hoe “Ny hatsaram-panahy mamelona ny fanahinao” (Fiainana Vaovao. Ny Baiboly). Tsy ny “fanahiny” ihany no novelomina, fa ny fiainany manontolo. Nomeny ny kelikely, ary nampitomboiny ny kelikely.
Raha mbola tsy azontsika ny lesona, dia misy andininy vitsivitsy ao aoriana kely:
“Misy mizara betsaka ary manana mihoatra hatrany; ny iray kosa mahantra amin’izay tsy tokony hataony, nefa mihamahantra kosa” (Ohabolana 11,24). Fantatr’i Jesosy Tompontsika izany rehefa nilaza hoe: “Manomeza, dia mba homena ianareo. Famarana feno sy ahintsana no hozongozonina ary safotra no homena eo am-pofoanareo; fa araka ny famarana izay amaranareo no hamarana anareo indray.” (Lioka 6,38) Vakio koa ny fotoana amin'ny 2. Korintiana 9,6-15!
Tsy hoe manao asa soa foana akory. Mila manambatra ny fahalalahan-tanana sy ny fitsarantsika isika. Tsy afaka mamaly ny filana rehetra isika. teny 3,27 eto dia manoro antsika hoe: “Aza mandà tsy hanao soa amin’izay sahirana, raha mahay manao izany ny tananao”. Midika izany fa tsy mendrika ny fanampiantsika ny olona sasany. Angamba noho izy ireo kamo sy tsy te handray andraikitra amin'ny fiainany manokana. Manararaotra ny fanampiana sy ny fahalalahan-tanana izy ireo. Mametraha fetra ary aza mandà tsy hanampy.
Inona avy ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomen’Andriamanitra anao? Manana vola kely kokoa noho ny hafa ve ianao? Inona avy ireo fanomezam-pahasoavana anananao? Fandraisana vahiny? Fampaherezana? Maninona raha mamelombelona olona amin'ny harentsika isika? Aza atao fitahirizana izay mijanona ho feno. Sambatra isika mba ho fitahiana (1. Petrus 3,9). Angataho Andriamanitra mba hampiseho aminao ny fomba hizarana amim-pahatokiana ny fahatsarany sy hamelombelona ny hafa. Misy olona azonao anehoana fahalalahan-tanana sy hatsaram-panahy ary fangorahana ve amin’ity herinandro ity? Angamba amin’ny alalan’ny vavaka, ny fihetsika, ny teny fampaherezana, na ny fitondrana olona akaiky kokoa an’i Jesosy. Angamba amin'ny mailaka, hafatra an-tsoratra, antso an-telefaona, taratasy na fitsidihana.
Aoka ianao ho toy ny mpiasa any am-pandriana renirano, ary avelao hitsoaka anao ny tso-drano avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny hatsarany. Ny fanomezana amim-pahalalahan-tanana dia mitahy ny olon-kafa ary mahatonga antsika ho anisan'ny Fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Rehefa miray amin'Andriamanitra ianao mikoriana ny fitiavany, dia hikoriana eo amin'ny fiainanao ny fifaliana sy ny fiadanana. Hamelombelona ny tenany ireo izay mamelombelona. Raha atao teny hafa dia: sotrokotr'Andriamanitra ao anaty, nofafazako izy, Andriamanitra manana sotro lehibe.